Afrika Mainty · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Novambra, 2012
Frantsa 29 Novambra 2012
Etiopia 29 Novambra 2012
Ireo fehin-dalàna any Madagasikara dia tsy mahafehy ny fampanjariana volabe amin'ny fitrandrahana ny harena akibon'ny tany
Madagasikara 28 Novambra 2012
Ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana “Bemolanga-Total watch” no mitatitra fanamarihan'ireo mpahay lalàna any Madagasikara [fr]: le code minier malgache et la loi sur les grands investissements miniers (LGIM) ne sont pas appropriés pour englober tous les paramètres d'un contrat d'Etat de la dimension du projet “ireo fehin-dalàna Malagasy mikasika...
Angola 28 Novambra 2012
Zambia 28 Novambra 2012
Madagasikara 27 Novambra 2012
Vehivavy Afro-breziliana, Ngita Volo Sy Fahatsiarovantena Mainty
“Afaka asarakorako ny volo rehefa handeha hianatra, saingy tsy tiako. Satria lasa maina ary manjary ratsy tarehy be. Ratsy be ny voloko”. Ankizivavy kely no nilaza toy izay tao amin'ny habaka-lahatsary fanadihadiana Raíz Forte [pt:Faka Mafy] mikasika ny vehivavy mainty hoditra Breziliana amin'ny fikarakarany ny volony amin'ny sarangan-taona rehetra. Araka ny...
Mozambika 22 Novambra 2012
Nitantara momba ny fihazana tsy ara-dalàna ireo elefanta ao amin'ny valan-javaboaharin'i Mareja [anglisy], ao Cabo Delgado, avaratr'i Mozambika ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny gazety @Verdade. Araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra, andiana mpihaza an-tsokosoko miaraka amin'ny «fitaovam-piadiana arifomba» no « mamono ireo elefanta» ary «maka ampahany goavambe amin'izany» : Isan-kerinandro, biby roa farafahakeliny no vonoina, mba...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Novambra 2012